Ny Galaxy S20 Fan Edition dia mipoitra ao amin'ny tranokala Samsung any Philippines | Androidsis
Ny Galaxy S20 Fan Edition dia miseho ao amin'ny tranokala Samsung any Filipina
Andro vitsy lasa izay, namoaka lahatsoratra izahay izay nanoroanay anao ny momba ny akaiky ny daty fandefasana ny Galaxy S20 Fan Edition, na S20 FE, terminal iray izay hamely ny tsena ho modely fidirana amin'ilay faritra S20 izay zarao ny famolavolana sy ny sasany manokana.
Taorian'ny nipoiran'ny pejy fanohanana an'ity terminal ity tao amin'ny tranonkalan'i Brezila sy tany Alemana, dia anjaran'ny tranokala Samsung any Filipina izao. Ity tranokala ity dia naneho vetivety ny pejin'ny vokatra, pejy momba izany tsy misy intsony io.
Ity fanontana vaovao an'ny Galaxy S20 ity dia hamely ny tsena ho solon'ny Galaxy S10 Lite, ny kinova fidirana amin'ny laharana S10 an'ny Samsung, maodely iray izay natomboka teny an-tsena tamin'ny volana Janoary amin'ity taona ity ihany, ka mahavariana fa Samsung dia mikasa ny handefa an'io toe-karena S20 io, herintaona taty aoriana.
momba miavaka momba ity kinova S20 ity, ireo dia tafaporitsaka andro vitsy lasa izay na dia amin'izao fotoana izao aza mbola tsy fantatsika ny vidiny fandefasana, vidiny mety manodidina ny 600 euro, vidiny izay hihena amam-bolana aorian'io, toy ny Galaxy S10 Lite, ary ho azontsika amin'ny 500 Euros mahery fotsiny.
Galaxy S20 Fan Edition (FE) famaritana
Ny Galaxy S20 Fan Edition dia misy amin'ny kinova roa: iray miaraka amin'i 4G tantanan'ny fikirakirana Exynos 990 ary iray hafa 5G miaraka amin'ny Qualcomm's Snapdragon 865 amin'ny maha processeur azy. Ny fahatsiarovana dia hahatratra 6 GB RAM ary fitehirizana 128 GB.
Ny efijery 6,5-inch, miaraka amin'ny vahaolana FullHD +, dia hanana Famelombelona 120 Hz, Fiarovana Gorilla Glass 3 (tsy 5) ary ho karazana SuperAMOLED izy io. Ny bateria dia hahatratra 4.500 mAh ary hifanaraka amin'ny famahanana haingana hatramin'ny 25W.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Ny Galaxy S20 Fan Edition dia miseho ao amin'ny tranokala Samsung any Filipina
Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne dia manoratra fangatahana 230.000